Thai Nepal News:: फेरी चल्यो नेटिङको चर्चा, लगानीकर्ताले पाउलान उधारोमा सेयर कारोबार गर्न ?
फेरी चल्यो नेटिङको चर्चा, लगानीकर्ताले पाउलान उधारोमा सेयर कारोबार गर्न ?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्सेले) ले नेटिङ सुविधा (निरन्तर राफसाफ/तिर्न बाँकी रकम अर्को दिन हिसाब मिलान गर्न सकिने सुविधा) सहित क्लियरिङ बैंक (सेयर कारोबारपछि रकम राफसाफ गर्ने बैंक) थप्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
मंगलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा क्लियरिङ बैंक थप्न भइरहेको ढिलाई बारे जानकारी दिने क्रममा नेप्सेले यस्तो जानकारी दिएको हो । ‘त्यतिखेर एकभन्दा बढि क्लियरिङ बैंक थप्न मिल्ने प्रणाली थिएन, हामीले नेटिङ सेटलमेन्टको सुविधा समेत दिएर क्लियरिङ बैंक थप्ने तयारी गरेका छौं, भेण्डर कम्पनीले यो प्रणालीको परिक्षण गरेर मात्रै थप्ने भनेकोले त्यसमा काम भइरहेको छ,’ नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले बताए ।
पहिलो चरणमा निरन्तर राफसाफ वा नेटिङको सुविधा धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरुले मात्र पाउँने नेप्सेले बताउदै आएको छ । यो सुविधामा ब्रोकरले एक दिनभर गरेको सबै सेयर खरिद र सबै सेयर बिक्रीको कुल हिसाब निकाल्दा अपुग हुने सेयर वा रकम दुवै अर्को दिनको कारोबारमा मिलन गर्न सिकने सुविधा हो । यो सुविधा ब्रोकर कम्पनीले नै पाउन पनि निकै समय भने लाग्ने देखिन्छ ।
समय लाग्ने कारण
भारतमा केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस) आएपछि कारोबार रकम १५ प्रतिशतले बढेको र नेटिङ सुविधा भएपछि यसमा ४५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले डिम्याट सुरु गरेपछि बजारमा वृद्धि देखियो ।
नेपालमा सीडीएससी सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षबढि भइसकेको छ भने नेटिङ सुविधा अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसको लागि आवश्यक पर्ने भुक्तानी ग्यारेण्टि फण्ड बनिसकेको छैन् । नेप्सेले यस सम्बन्धि नियमावली बनाएर धितोपत्र बोर्ड पठाएको भएपनि सबै नियमावलीलाई एकिकृत गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचअहिले चलिरहेको शित युद्धले समेत यो सुविधा तत्काल आउन समय लाग्ने देखिन्छ ।
भारतमा भने यो प्रणाली अपनाउदा हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणको लागि नेशनल सेक्युरिटिज क्लियरिङ कर्पोरेशनले अन्य निकायको सहयोगमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ग्यारेण्टि गरिदिन्छ । श्रीलंकामा भने एक्सचेन्ज आफैले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारहरु बताउछन् ।
सर्वसाधारणले कहिले पाउलान यो सुविधा
यो सुविधा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पाउन इन्ट्रा डे कारोबार अर्थात् एकै दिन पटक पटक त्यही सेयर किनबेच गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी गरिने कारोबारलाई संक्षेपमा टी प्लस जिरो समेत भनिन्छ । अहिले नेपालमा सेयर कारोबारपछिको तीन दिनभित्र सेयर र रकमको राफसाफ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसलाई ‘टी प्लस थ्री’ पनि भनिन्छ ।